Namuhla kukhona amaningi ehlukahlukene ezokungcebeleka, futhi kunzima akumangalisi muntu kule ndawo. Kodwa umkhakha nokuzijabulisa kwesimanje uyaqhubeka ukwenza imibono engavamile. Phakathi nabakhe emizini emikhulu sekuthandwa kakhulu ithimba imidlalo. Zinikeza ithuba hhayi kuphela shí omunye ngokoqobo, kodwa futhi ukuthuthukisa nokubonisa izimfanelo siqu ezifana ubuholi, nobuciko kanye ukuhlakanipha, kanye embule ngokomzimba: dexterity kanye nokudidiyela. Adventure imidlalo kudlalwa esikhathini sangempela, abizwa ngokuthi "izimfuno", okuyinto yena, wabolekwa imvelo ezihlukahlukene imisebenzi ikhompyutha. Imibandela zihlukile nokuxhumana womuntu sangempela imvelo.
"Igumbi Escape" kubhekwa uhlobo zakudala phakathi kwezinhlobo game yomsebenzi. Lo mdlalo ezihlakaniphile udlalwa izinto endlini noma ngaphezulu ezihlobene nomunye. Abahlanganyeli reshivshiesya iqhaza ke, kukhiyiwe ngaphakathi. Umgomo - ukuthola tesimongcondvo, okhiye, zonke izinhlobo izindlela zokuthola egumbini, ukuxazulula puzzle futhi ukuqagela nezimfumbe. Omunye ethandwa kakhulu uhlobo - lesi sigaba "Bunker". Action game okwenzeka kulezi bunkers abalahliwe, okuyinto ungazange usebenzise inhloso yazo, kodwa eziklanyelwe umcimbi. Umlando Quest, kanye nemigomo yalo nemibandela, iyashintsha futhi ube nenani elikhulu ongakhetha, ngakho ukuba sikhubeke emgqeni efanayo zezikhonzi kuyinto ngempela eziyinkinga.
iyona imfuno kanjani?
Lapho ibizwa eyenziwa bunkers, ke efika engqondweni post-ezibhubhisayo imvelo, emisebenzini yezempi ezihlobene kwethulwa usongo kwezikhali zenuzi, nobuchopho ngesikhathi esisodwa kuhlanganisa imodi lokusinda. Kuyinto lokhu isimo owandile ngaphakathi catacombs, ifakwe umdlalo iqembu. Ukuze silondoloze isimo esinjalo izisebenzi ngubani ahlele imfuno "Bunker", ophindukuzalwa e indima wezempi ngisho phambi komnyango emagcekeni. Bagqoka amasudi afanayo nokuziphatha mpendulwano. Ngezinye izikhathi endaweni, sakhiwo sendzaba kanye nemifanekiso abasebenzi ezicatshangwe kahle kungaba sithungathe umlando waleli isimo, kodwa lalizishaya, kuyilapho umuzwa imfihlakalo ne-innuendo, nakuba ngezinye izikhathi kwenziwe esithangamini okugcwele isingeniso inkambo icala. Ngu ubukhulu hopper incane, kodwa namanje ngempela isikhathi esiningi abahlanganyeli esichithwa izindawo cwaningo, ukucinga izinto kuzosiza siphume, ngokufanele, sisebenzise umcondvo ngokuhlanganyela.
Ngokuvamile umdlalo ziqasha iqembu labantu 4-6 - okungukuthi inombolo udinga ukuthola isigaba "Bunker". Izibuyekezo bathi zonke kumadivayisi eselula kanye electronics expropriated abahlanganyeli esehlakalweni. Kuye isihloko olwenziwa umdlalo nokuba yinkimbinkimbi yayo futhi usethe umkhawulo yobudala, ngakho akuwona wonke imigqomo kungavela nezingane. Isikhathi Ukudlula imfuno kunikezwa kuncike iqoqo: komunye amahora ambalwa. Uma befuna esidayisa hopper kuthatha isikhathi eside, abagqugquzeli kusengaphambili enikeziwe umthamo encane, okuyinto Yiqiniso, futhi kudingeka afune. Ukudla, ngenhlanhla futhi ayikho ngaphezu lwendaba, abahlanganyeli yimpumelelo ngesikhathi ekusesheni amagceke kungase kubakhube ku izabelo owomile, yakhelwe ngokuhambisana namasiko ngesikhathi sempi.
Isigaba enkulu "Bunker"
Lokhu into itholakala enhlokodolobha kwamasiko yezwe - Petersburg. Quest "Bunker" (Petersburg) zithandwa kakhulu ngenxa okwangempela yayo nosayizi: sifaka owangcolisile eziyisishiyagalombili. Ngaphambi umdlalo, abahlanganyeli labetibambile coaching: abahleli show isiqophi ngendlela ehlukile cinema ihholo, lapho lizwakalise izinyathelo zokuphepha kanye nemigomo efanele izuzwe iqembu. Sisendleleni kwayo le ndlu banikwa ihora noma ngaphezulu. Ngaphakathi, konke ifakwe e umoya kwamaSoviet: amaphosta ezindongeni, emashalofini - buso kanye ezihlukahlukene amadivaysi. Futhi labo wathatha imfuno, uqaphele ukuthi zonke izinto ezakhiweni yasekuqaleni. Le ndlu ngokwayo ngempela yokukhosela ibhomu egumbini elingaphansi kwendlu. Ngokusho umlando, kusungulwe abagqugquzeli kudala ishiywe izakhiwo ngenxa ezinye izimfihlo esabekayo elihlobene ne ukuguquka kwezakhi zofuzo nababengaphambi zalabo waphinde waphumela lapho. Tinjongo: ukwazi iqiniso ngalokho okwenzeka, ukuthola isabelo, ukudambisa ibhomu uphume.
Quest "ndlu kukaStalin" kubhekwa omunye the best in Volgograd, futhi zithandwa kakhulu eMoscow akuyona ngaphandle kwenzalo labo abantu basaqhubeka ukwembula izimfihlakalo umlando elihlobene ne Iosifom Stalinym. Isenzo ikhulela Analogue "Omkhulu," noma uMholi ehhovisi, lapho afike achitha khona isikhathi esiningi futhi ugcine ukubangisana kwemibuso emikhulu imfihlo - eSoviet Union. Uma amalungu ethimba uthole ngaphakathi iminyango ndlu kukhona evaliwe, bese ulinda nguNobhala-Jikelele yokungenisa izihambi akudingekile - konke mthetho ezolile yayo ukulungele bajeziswe ngokugcwele. Ngesikhathi umdlalo kukhona isikhathi esithile ukuze athole indlela yokuphuma, futhi benza ngcono ngokushesha, kungenjalo le ndlu nezivakashi zakhe ezindiza emoyeni. Njengazo zonke izimfuno, ligcwele zonke izinhlobo nezimfumbe kanye puzzle, soundtrack kanye khona egunjini sithembele icala isimo.
Ziningi abafuna ukuqeda imfuno "Bunker". Izibuyekezo ukuthi ushiye ababambiqhaza, kukhona okuhle nokubi. Ezimweni eziningi, abantu baqonde yinkimbinkimbi puzzle isimo sangaphakathi. Khuluma kahle mayelana imidlalo lapho anqobe kufinyelelwa hhayi kuphela lapho kukhululwa bin, kodwa futhi ukuze asindise ukuphila kwakhe futhi ukuthi sonke isintu. Isigaba Cabangisisa, kulapho kuba abahlanganyeli wanelisekile. Ngakho-ke, abalandeli ukuhlekisa ufisa ugxumela umoya kahle eqalekako uthole imfuno "Bunker". Moscow njengoba maphakathi nezwe futhi muzi omkhulu ubophekile ukuba ukuhlangabezana zonke izimfuno abathengi, ngokulandelana, inikeza uhlu olubanzi yezigaba. I lwendaba ngokuvamile yakhelwe kulondolozwa emhlabeni esikhathini esidlule noma esizayo, lapho umsebenzi oyinhloko idambise ibhomu noma ukuvimbela ekuhlaseleni izitha.
E-Moscow, isibonelo, nethuba ukuvakashela imfuno "Bunker" lapho isenzo senzeka khona ngesikhathi seMpi yoMhlaba yesiBili, noma iqembu kuzovimbela kokuhlasela kwamaphekula. Kunjalo elizimisele wokutakula unikezwa esilinganiselwe, futhi ezincane amaminithi asele kubahlanganyeli, yilapho bezibona khona ukunqotshwa ukwethuka. Izimpendulo zalezi imidlalo yangempela ngokuvamile nomdlandla, njengoba abantu uyaqaphela uya kubo befuna injabulo kanye adrenaline.
Izimfuno abahlebayo esikhathini esizayo
Okuthakazelisayo akuzona kuphela izenzakalo, ukubuya esithile esidlule, kodwa ethwele ku Ngokuzayo engaziwa. Esiqintini imidlalo lingathuthukiswa izinkomba ezahlukene ngokuphelele ngoba umcabango womuntu angenamkhawulo, kodwa yinye into esikhathaza abadali izimfuno bukhomba - ikusasa lapho abakubonisayo, akuyona kamnandi, ngisho kunalokho ezibuhlungu kakhulu. Abahlanganyeli angamalungu eqembu ngesikhathi sabantu ezisengcupheni, ukufihla ezindlini ezingaphansi komhlaba ngemva kwempi. Kulezi umcimbi post-ezibhubhisayo idlulisa imfuno "Bunker". Ufa kanye nakwamanye amadolobha, ezazidume ngokutshala Ukukhetha yayo enkulu izimfuno ngisho bamazwe onokuqonda kunazo. Uma, ukwenza isibonelo, ufuna ukuya ezikhathini yezinto Okwesithathu iMpi Yezwe futhi iqhaza isiphetho labantu emhlabeni, noma inqume ukuba ngomunye wabo oyilungu leqembu wokutakula, ozama ukubuyisela le ndlu isimiso esisekela ukuphila, izifiso zakho njalo waphendula.
Kirovograd. Ukuqamba kabusha umuzi kohlaka decommunisation umthetho
Izikhangibavakashi Costa Rica: incazelo, umlando kanye nokubuyekeza
BTR-80: Imininingwane Ukusebenza
Yikuphi ekilasini uyindoda ocabangelayo?
Ebhukuda amahlengethwa - ukuzijabulisa noma indlela kwengqondo?
The main izinkinga zemvelo yoLwandle Olumnyama
Kungani isiphequluli singabonisi izithombe futhi kufanele ngenzeni?
Iwayini 'Mikado "- umkhiqizo isitayela Japanese
"Kempinski Grand Hotel" Gelendzhik: isibalo amakamelo, ukubuyekezwa, intengo kanye nencazelo
Kungani emibi emuva? Awahlabi ngemuva, yini okufanele uyenze?
Enye isithuthuthu nezybyty "Dnepr"
Indlela ukupheka multivarka ujamu ikhabe
Beetroot isaladi nge ushizi, inyama noma ikhukhamba
Salad "Santa Claus": iresiphi
I-branen ye-wheaten ewusizo
Ukuhoxiswa izimpawu. Kuyini futhi kanjani ukulwa naso?
Ukupheka Pudding multivarka kanye nezinye izitsha eziningi ezithakazelisayo